डा. गोविन्दराज भट्टाईको ‘गोधुलिमा दस पाइला’ लाई पछ्याउँदा | samakalinsahitya.com
भाषा अनुवादमा विद्यावारिधि गर्ने पहिलो नेपाली डा. गोविन्दराज भट्टराई हाल त्रिभुवन विश्व विद्यालयअन्तर्गत केन्द्रीय क्याम्पसमा कार्यरत छन् । जीवनको लामो समय राष्ट्रको भाषाशिक्षणमा र साहित्यमा समर्पित गरको डा. भट्टराई जीवनलाई बेग्लै अर्थमा बुझ्न खोज्छन् । नयाँ प्रयोग , नयाँ सिद्धान्तमा आफूलाई समपिर्त गरेर साहित्यिक माहौलमा सबैभन्दा चर्चित बन्न पुग्नु कुनै चानचुने खेल होइन । जब देशले जनयुद्धको पीडा भोग्यो उनी ‘सुकरातका पाइला’(२०६२) लिएर आए । जब धेरैअघि भुटानी नेपाली जनताको जीवन अन्धकारमा कुण्ठित भएको आफ्नै आँखाले देखे त्यसबेला ‘मुग्लान’(२०३१) बोकेर आए । विश्वमा चलेका विभिन्न धार, बादको विभिन्न कलमी हाँगा ल्याउदै नेपाली साहित्यमा रोप्न थाले ।
देशको चौधरा काट्न नसकेको नेपाली भाषालाई ‘सेलेक्टेड नेपाली एसेज, सेलेक्टेड स्टोरिज फ्रम नेपाल, डिक्लेश्सन अफ न्यु गड र स्टोरिज अफ कनाप्लिक्ट एण्ड बार’ मार्फत विश्वको साहित्यमा पुर्याउन अथक परिश्रम गरेँ । उनलाई विदेशीया भन्ने आरोप पनि लाग्यो । विश्वमा चलेको उत्तर आधुनिकताको थोत्रो सिद्धान्तलाई पोलिश लगाएर चम्काएर नेपालीलाई झुक्याउने भन्ने आरोप पनि लाग्यो । नयाँ कुरा नयाँ सिद्धान्त अनौठो हुन्छ । विदेशीका धेरै थोत्रा कुरालाई हामी नयाँ मानेर स्वीकारिरहेका हुन्छौ । त्यहाँ पचास वर्षअघि चलेका कुरा यहाँ भर्खर आउनु कुनै नौलो कुरो होइन । हुन त अहिले विकासको चरम विन्दुमा पुगेको सञ्चारले तुरुन्त ल्याइदिन्छ तर त्यसलाई भोग्ने छाम्न र बुझ्न हामीलाई वर्षौ लाग्न सक्छ । त्यही बुझाइ, छमाइ र भोगाइका सिद्धान्त रटाइरहेका छन् डा. गोविन्दराज भट्टराई ‘उत्तर आधुनिक ऐना’ र ‘उत्तरआधुनिक विमर्श’ सिद्धान्तका पहाड ल्याएर ।
निबन्धकार भट्टराइको बाल्यकालीन सस्मरणले भरिएको यस पाइलाले सवेदनाको भित्री तहसम्म हल्लाउन सक्षम छ । यस पाइलामा मन भाच्ने लौरा र सिर्कनाहरूको सम्झनामा र यो हृदयको कुनामा दुख र उज्यालो मिसिएको बत्ती शीर्षकमा निबन्धकारको बाल्यकालको कारुणिक दृश्य चित्रित भएको छ । मन भाच्ने लौरा र सिर्कनाहरूको सम्झनामा म अत्यन्त सवेदनशील बन्न पुग्छु । मलाई लाग्छ ,मलाई प्रत्येक पल प्रत्येक क्षण यसका घटना, शब्द र शिल्पले मलाई पछ्याइरहेको छ । बालकको हृदय कति कोमल छ । बालमनोभावनाको भित्री तहसम्म पुगेर त्यसका प्रत्येक ढुकढुकीलाई सजीव रूपले उतार्नसक्नु एउटा कला, शिल्पको उत्कृष्ट नमुना मान्छु म । लाग्छ यो निबन्ध होइन कथा हो । कथा पनि होइन लोककथा हो । निबन्धकार आफूसँगै भावकलाई प्रत्येक घटनासँग साक्षात्कार गराउँदै संवेदनाको भित्री तहसम्म पुर्याउँछन् । त्यहाँ एउटा कारुणीक दृश्य सजीव भएर उत्रन्छ । भित्री हृदय वेदना र संवेदनाले उच्छवास लिन आइपुग्छ । आजभन्दा पचास वर्ष अघिको हाम्रो देश त्यसमा पनि अझ पहाडी भेगका बालबालिकाको बाल्यकाल कस्तो थियो ? त्यसको साक्षी प्रमाण सहित निबन्धकार यहाँ उभिन्छन् । घरको दयनीय अवस्था विद्यालयमा शिक्षकले प्रत्येक दिन कतिवटा लौरा भाचे भन्ने पाशविक याताना सहनुपर्ने वाध्यता, कल्पना गर्दा पनि आजको पुस्तालाई कहाली लागेर आउँछ । त्यसबेला अभिभावकले बालबालिकाप्रति राख्ने धारणा यो वाक्यले बुझौँ – ‘यो नयाँ गुरुजी साँच्चै तगडा रहेछ । उसले चाहिने दिनको एघार– वटा बाँसका सिर्कना भाच्तोरहेछ । बज्या केटाहरू त डरले छुलछुली । हाम्रा नसेले पनि पाठ बुझाएनछ हिजो । मजाले ताजन दिएछ गुरुजीले । रातभरि बज्या जोरो आयो भनेर काम्दै थियो । बिहान फेरि लप्सी मा झट्टी हान्दै थियो ।’ यी वाक्यांशमा त्यस बेलाका बालबालिकाको अवस्था कस्तो थियो होला भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ । सायद बालमनोविज्ञान कुन चरो को नाम होला भन्ने थियो त्यसबेला । आजका सहरीक्षेत्रका केही बालबालिका सुविधाजनक विद्यालयमा अभिभावकको माया ममतामा हुर्कदै छन् । तर पहाड र गाउँका अधिकाँश बालबालिकाको अवस्था आज पनि उही छ । अभाव, गरिब र अशिक्षाले उही भोक्तान भोग्न बाध्य छन् । यो निबन्धलाई आजका दुर्गम क्षेत्रका अधिकांश बालबालिकाका प्रतिनिधि कथा मान्छु म । एक ठाउँमा गएर म मजाले अल्झन्छु – ‘हिउँदको चिसो सिरेटो र ठिडीले घरभित्र पसेर छेड्न खोज्थ्यो । फिलफिले दौरा छेडेर छाती र करङ्ग सम्म पुग्दथ्यो । म आज पनि बेलाबेला छाम्दछु अझै यो ढाड चिसै लाग्छ ।’ यो वाक्यमा कति करुणिकता छ , कति मर्मस्पर्शी वेदना छ । यहाँ निबन्धकार गरिवी र अभावमा तडपेका बालबालिकाको कारुणिकताको प्रतिनिधि बनेर उभिएका छन् । नहुनु जस्तो सारो संसारमा के छ ? जनयुद्धले विध्वश पारेको हाम्रो देशमा अस्थिर राजनीतिले विपन्न वर्गको आर्थिक अवस्था दिनपरदिन गिर्दो अवस्थामा छ । महङ्गी बढेर सगरमाथा नाघिसकेको छ । सर्वसाधारणको जीवन कति कष्टमय बनेको छ । आज हजारौ बालबालिका उही भोको पेट र चिसो ढाड लिएर सुत्न बाध्य छन् । संवेदनाको भित्री तहसम्म हल्लाउन सक्ने यो पाइलाले कुनबेला पाठकको मनमा हाँसोको फोहरा उठाउँछ थाहा पाउन सकिदैन । पाठकलाई रुनु कि हाँस्नु दोधारको स्थितिमा पु¥याउँछ । यो वाक्य पढौँ – ‘मलाई देखेर ऊ हिसिक्क हाँस्यो अनि अर्गेलीमा डोरीले पाटी भिरेर दौराका फेर फिलिलि पार्दै हामी चिहान डाडातिर उड्यौ ।’ यस वाक्यमा फिलिलि पार्दै भन्ने शब्दले बेग्लै हास्य मिश्रित भाव दिएको छ । बालकको मन पानीका फोका जस्तै हुन्छ छिनभरमा नै हराइजाने । जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि ऊ समयसँग तुरुन्त आफुलाई समायोजन गरिहाल्छ । यो बालकको मुख्य विशेषता हो । यहाँ राँके भन्ने केटो आफनो सम्पूर्ण पीडा भुलेर पढ्नलाई दौडन्छ । वास्तवमा जीवनको सानो कला यहाँ सिर्जिएको छ । त्यस्तै कवि दामोदर पुडासैनी ‘किशोर’ को विद्यालय सम्बन्धी कविता र कवि तिलक चाम्लिङको मातृभाषामा अध्ययन गर्न नपाउँदा कोरिएको कविताले यो पाइलालाई सार्थक र भावुक बनाउन सफल भएको छ । उत्कृष्ट भाव, शैली र शिल्पमा व्यक्तिगत अनुभूतिलाई विभिन्न रङ्गले रङ्गाइएको यो पाइलाले पढिसक्ता पनि प्रत्येक हृदयलाई पछ्याइरहन्छ ।
त्यस्तै यस पाइलाको दोस्रो शीर्षक छ — यो हृदयको कुनामा दुख र उज्यालो मिसिएको बत्ती । बाल्यकालीन सस्मरणको कलात्मक अभिव्यक्ति हो । यस निबन्धमा निबन्धकारको जीवनको एउटा नोस्टाल्जिया मान्छु म । वाल्यकालको जीवनले भविष्यको एउटा ठोस आकार कसरी लियो भन्ने कुरा यहाँ देखाइएको छ । यो निबन्धकारको एउटा मीठो इतिहास हो । त्यसैले मैले यसलाई नोस्टाल्जिया भन्न रुचाएँ । जीवनले नयाँ कुरा देखेको, नयाँ कुरा भोगेको अनि भविष्यका लागि अनगिन्ती सपनाहरूले आकार लिएको समय हो यो । यहाँ सुदुर भविष्यका लागि प्रत्येक पल समयले जग बसाउन थालेको जीवन हो । पहाडबाट भर्खर मधेश झरेको केटोले मधेशको धेरै चालचलनसँग परिचित हुँदै नयाँ कुरा सिक्दै जीवनको पाठ पढेको समय हो यो । आफनो सफल भविष्यको बलियो जग धैलाडुब्बा को श्री आर्दश विद्या मन्दिरले स्थापना गरिदिएकोमा निबन्धकार त्यस विद्यालय र त्यहाँका गुरुहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाभाव अर्पण गर्दछन् । त्यहाँ बस्दा सैद्धान्तिकज्ञान मात्र नभई आफूले धेरै व्यवहारिक ज्ञान भोगेको कुरा निबन्धकार उत्कृष्ट भाषाशिल्पमा व्यक्त गर्दछन् । नौलानौला घटना र विगतको तराईको दृश्यले अब के होला भन्ने उत्सुकता र अभिव्यक्तिको उच्च कलाले पाठकलाई यो पाठ पढिरहुजस्तो लाग्छ । व्यक्तिको वाल्यकालमा के कस्ता घटना घटेका हुदाँ रहेछन् त्यस घटनाले उसको मानवीय संवेदनामा के कस्तो असर पारेको हुन सक्छ ती कुराहरू हामीले सोच्नै नसक्ने अवस्थामा उद्भाषित भएका छन् । कतिपय ठाउँमा घटना र विषयवस्तु को कारुणिकताले हामीलाई मजाले बाध्दछ । आफूलाई त्यो क्षणमा लगेर पछार्दछ र आफैसँग तुलना गर्न मन लाग्दछ । सबैको जीवनमा एउटा नोस्टाल्जिया हुन्छ तर त्यो नोस्टाल्जिया पुस्तक भएर बाँच्न सक्ला र निबन्धकार गोविन्दराज भट्टराईज्यूको झै ? यो प्रश्नले मलाई यो पाठ पढुञ्जेल लखेटिरह्यो सायद अरू कसैले यो पाठ पढ्यो भने उसलाई पनि यो प्रश्नले लखेटिरहनेछ नथाकुञ्जेलसम्म ।
निबन्धकार भट्टराई जति राष्ट्रको शिक्षा, भाषा र साहित्यप्रति संवेदनशील छन्, त्यति नै देशको राजनैतिक अवस्थाप्रति सचेत देखिन्छन् । सङ्ग्रहका केही निबन्धहरू राजनैतिक घटना र उपघटनाबाट उत्प्रेरित भई निजात्मक अनुभूतिहरू पोखिएका छन् । यी निबन्धहरू हस्यव्यङ्ग्यात्मक भाव शैलीमा तत्कालीन शाही सरकारले गरेको निर्णय र राष्ट्रले भाग्नु परेको अत्यन्तै भयानक द्वन्द्वको अवस्थाको जीवन्त चित्रण छ । यस विषयवस्तुका निबन्धहरू - एउटा अमर नाटकका केही दृश्यहरू, यसरी ढल्यो वर्लिन पर्खाल, फ्रिडम एट मिडनाइट, नीलडाम कम्पनीमा एक रातमा, मन्त्रीहरू त्यहाँ मुस्कुराइ रहेका थिए हुन् । यी पाइला अन्तर्गत एउटा अमर नाटकका केही दृश्यहरूमा देशमा जनयुद्ध भइरहेको समय राजा ज्ञानेन्द्रले शासनसत्ता हातमा लिइ आफैले शासन चलाएको समयताकाको राजनैतिक झल्को छ यस पाइलामा । राजा ज्ञानेन्द्रले शाही सत्ता टिकाउन स्थानिय चुनाव गराउदाको क्षणले भाषिक अभिव्यक्ति दिदै सुन्दर ढङ्गले प्रस्तुत गरेका छन् । देशमा अशान्ति मच्चिएको समय शाही सरकारले आफनो शासनसत्ता टिकाउन गरेको निरङकुश खेलको मीठो भाषा शैलीमा व्यङ्ग्य हानेका छन् । त्यस्तै नीलडाम कम्पनीमा एक रातमा शाही सरकारले आफ्नो सरकार चलाउन चाहिने उच्च कर्मचारी जनतालाई प्रभोलन देखाएर डाकिएको बारे व्यङ्ग्यवाण हानिएका छन् । जनतालाइ प्रभोलन देखाएर उच्च पद दिन खोजिएको बारे रोचक भाषा शैलीमा व्यङ्ग्य हानिएको छ ।त्यस्तै अर्को अति सुन्दर भाव शैलीमा लेखिएको निबन्ध छ ।
यहाँ अझै आगो निभेको छैन यस शीर्षकमा पनि उनी त्यससमयमा भएको अराजकताप्रति अत्यन्त असन्तुष्ट छन् र ती असन्तुष्टिलाई भावको एउटै बगाई नभई बिभिन्न बिचारको धाराबाट बगाउँछन् र अन्त्यमा एक मुस्टखोलो रूपमा बगाउँछन् । जुन खोलोको वेगले पाठकलाई पढुञ्जेल बगाएको बगायै गर्छ । यस पाइलाका प्रत्येक निबन्ध राजनैतिक व्यङ्ग्यवाण हानिएका छन् । यी मध्ये फ्रिडम एट नाइट, अत्यन्त उन्मुक्त भावशैलीमा लेखिएको शक्तिशाली निबन्ध हो । वि.स. २०६३ बैशाख ११ गते मध्यरातमा नेपालको इतिहासमा एउटा ऐतिहासिक खुसी कोरिएको समय थियो । मध्यरातमा २०७ वर्षसम्म चलेको शाही सरकार ढलेको थियो । मध्यरातमा देश निरङरकुश शाही सत्ताबाट मुक्त भएको घोषणा भयो । चारैतिर खुसीको लहर फैलिएको थियो । यहाँ उनाइसौँ दिनसम्म चलेको आन्दोलनको झल्काहरू पाइन्छन् । जनताले रगतको होली खेलेर, ज्यानका बाजी थापेर ल्याएको लोकतन्त्रको खुसीयाली यहाँ झल्कन्छ । राजैतिक सचेतनालाई निबन्धकारले बिम्बात्मक रूपमा निबन्धकारले यसरी पोखेका छन् :- विहान पाखा निस्केर हेर्छु ,कतै ठोकिने भीर छैन, पहरो छैन, पर्खाल छैन , घोचाभाटा छैनन् , सीमाहीन उन्मुक्तिजस्तै । यहाँ लडाईको मैदान छैन । हामीले फेर्ने सास कसैले नछेकेको, हाम्रो घाम कसैले नछेलेको , हाम्रो बतास सिरसिर चलिरहेको । कता जाऔ के गरौ जस्तो भयो । निर्बन्ध भएपछि , कहीँ ठाकिदैन भन्ने भएपछि उन्मुक्तिको नीलो दहमा हामफालौँ जस्तो भयो तर मध्यरातमा यो घडी आएको सुन्नै नपाइँ , देख्नै नपाई प्राणको आहुति चढाउनेहरू.. ।’ यस पाइलामा निबन्धकारले कुनै पनि कुरा सोझै नभनी प्रत्येक घटना , र विचारहरूलाई बिम्बात्मक अभिव्यक्ति दिएका छन् । लाग्छ यो उनको विम्बमा प्रस्तुत हुने विशेष खुबी हो ।
उनका बौद्घिक ज्ञान सीपद्वारा पाठकलाई अत्यन्त गम्भीर बनाउने खालका निबन्ध यस पाइलामा छन् जस्तै :- पुरानो घडीको लङ्गुर जस्तै घुमिरहेछु यो ससानो वृत्तमा– स्वान्त सुखाय लेख्छु भन्नेहरूका लागि ः चाहिदैन , अब हामीलाई केही पनि चाहिदैन –– कसले भत्काइरहेछ हाम्रो इतिहास । यी निबन्धहरू निबन्धकारको नितान्त वैयक्तित भावाव्यक्तिले भरिएको शक्तिशाली निबन्ध हुन् । यसमा निबन्धकारको आफ्नै निजात्मक अनुभूतिहरू पोखेका छन् । यहाँ पुरानो घडीको लङ्गुर जस्तै घुमिरहेछु यो ससानो वृत्तमा— निबन्धकार विश्वविद्यालयलाई घडी र आफूलाई त्यसको वरिपरि घुम्ने लङ्कुरको रूपमा स्वीकार्दछन् । तीसवर्षसम्म उनले आफ्नो जीवन सुम्पे विश्वविद्यालयलाई । यहाँबाट उनले के पाए, के गुमाए र के अनूभव गरेँ ती सबै कमाएका फलहरूको मिठो रस यहाँ पाठकलाई पिउन दिएका छन् । विश्वविद्यालयमा धेरै प्राध्यापक, धेरै सिद्धान्त र धार बोकेका होलान् तर यसरी ठूलो साहसका साथ आफूले देखेका भोगेका विसँगति र विकृतिलाई यसरी पोख्ने कतिजना पो होलान् र ? यो उनको कार्यक्षेत्रको ठूलो योगदान हो । उनले प्राध्यापकहरूका हक अधिकारका कुरा पनि बोलेका छन् भने प्राध्यापकहरूले पनि विश्वविद्यालय र विद्यार्थीप्रति गर्नुपर्ने उत्तरदायी कार्यको पनि दिल खोलेर प्रस्तुत गरेका छन् । कतिपय प्राध्यापकहरू व्यक्तिगत स्वार्थमा बगेर त्रिवि र विद्यार्थीहरू को भविष्यमाथि खेलवाड गरेको कुरालाई आक्रमक रूपमा प्रस्तुत भएका छन् । त्यस्तै विद्यार्थीहरूले खोज्ने सर्वसुलभता , सरलता , अनियन्त्रित र सहजताप्रति पनि कलात्मक अभिव्यक्ति पोखेका छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालय भित्र देखिने विसँगति र विकृतिलाई उनले आफनो भाषिक कलाले आर्दशता र नैतिकतालाई पालना गर्नु पर्ने सुझाव दिदै व्यक्त गरेका छन् । प्रत्येक विद्यार्थी प्राध्यापक र शिक्षकले पढ्नै पढने यो पाठ जीवनको अनुभूतिले खारिएको बौद्धिकताको कसीले माझिएको एउटा आर्दश व्यक्तिले पोखेको अत्यन्त मर्मस्पर्शी भावहरूको उच्चकोटीको निजात्मक निबन्ध हो । वास्तवमा सम्पूर्ण पुस्तकबाट नै यो थाहा हुन्छ कि निबन्धकार नेपाली मात्र नभई पाश्चात्य भाषा साहित्यका पनि गहना अध्येता हुन् । हुन त यो कुरा उनको महत्वपूर्ण पुस्तक काव्यिक आन्दोलनको परिचय, उत्तरआधुनिक विमर्श, उत्तरआधिुनिक ऐनाबाट थाहा हुन्छ तर त्यहा पोखिएका उनका वस्तुपरक सिद्धान्त यहाँ आएर आत्मपरक निबन्धका रूपमा पोखिएका छन् ।
चाहिदैन , अब हामीलाई केही पनि चाहिदैन निबन्धमा उनले आत्मपरकताले ती भावहरू यहाँ पोखेका छन् । प्रथम विश्व युद्धपश्चात विश्वमा जन्मिएको दादावादको यहाँ व्याख्या गरेका छन् । स्वान्त सुखाय लेख्छु भन्नेहरूका लागि –मा उनले नेपाली उपन्यास लेखनको कुरा उठाएका छन् र यससम्बन्धी केही जानकारी प्रस्तुत गरेका छन् । नेपाली उपन्यासलेख्ने उपन्यासकारको नामावलीसहित विश्वसाहित्यमा उपन्यासलेखनको कतिको महत्व छ भन्ने कुरा यहाँ देखाएका छन् । अन्त्यमा म किन लेख्छु भन्ने प्रश्नको उत्तर लेखकहरूले आ–आफ्नै तरिकाले दिने कुरा यहाँ उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै कसले भत्काइरहेछ हाम्रो इतिहास यस शीर्षकमा निबन्धकारको राष्ट्रियता झल्केको छ । साथमा हाम्रो देशको इतिहास, संस्कृति , सिमानामा भएको अतिक्रमणप्रति तिखो आलोचनात्मक टिप्पणी छ । शक्तिशालीले जे बोले पनि ठीक र सही हुने, निर्धाले शक्तिहीनले जति चिच्याए पनि केही नहुने अहिलेको अन्र्तराष्ट्रियस्तरमा नै मानवताको भन्दा शक्तिको पुजारीको बोलवाला रहेको यथार्थ पोखेका छन् । गौतम बुद्ध नेपालमा जन्मिएका सबुत प्रमाण हुँदाहुँदै पनि भारतले आफनो बनाइरहदा हामी मूख दर्शक बनेर केहीगर्न नसकेको स्थितिमा ब्यङग्य वाण हानेका छन् । निबन्धकारले बेलाबेलामा वाक्यलाई चोटिलो बनाउँदै राष्ट्रियताप्रति सबैलाई सजग रहन आव्हान गरेका छन् । उनको भाषाशिल्पले पढ्दै जाँदा कतैनकतै आफूलाई राष्ट्रियताको भावले च्वास्सच्वास्स घोचिरहन्छ । यो उनको लेखनको मुख्य विशेषता मानेको छु मैले । यस पाइलाका निबन्धहरू उनका नितान्त वैयक्तित गम्भीर भावाव्यक्तिले भरिएका छन् ।
सङ्गहका केही निबन्ध विदेशभ्रमणसँग सम्बन्धित छन् । त्यसैले यस पाइलामा ती निबन्धहरूलाई समावेश गरिएका छन् । यसअन्र्तर्गत दुखान्तहरूको रङ्गमञ्चमा पाइला टेक्ता र– एउटा अवोध गाउँले सहर पसे जस्तै छन् । एउटा अवोध गाउँले सहरमा निबन्धकारले अमेरिका भ्रमणमा रहदाको क्षणलाई आत्मगत रूपमा व्यक्त गरेका छन् । अमेरिकाले गरेको इलेक्ट्रोनिक विकास र त्यसले शिक्षण क्षेत्रमा पारेको प्रभाव देखेर निबन्धकार चकित बनेका छन् । साँच्चै एउटा अवोध गाउँले सहर पसेर अलमलिएको जस्तो भावव्यक्ति दिएका छन् । वास्तवमा नै हाम्रो देशको शैक्षिक अवस्था कस्तो छ र यहाँका विद्यार्थी र शिक्षकको मनोवृत्ति कस्तो छ भन्ने कुरा यहाँ निबन्धकारले प्रष्टाएका छन् । उनले शैक्षिक क्षेत्रमा लागेका व्यक्तिलाई संदेश मूलक अभिव्यक्ति दिएका छन् । यहाँ कतैकतै निबन्धकार मानवीय प्रवृत्तिमा दानवीय प्रवृत्ति बढ्दै गएको हाम्रो देशको वर्तमान अवस्थाप्रति तिखो आक्रोश पोख्न चुकेका छैनन् ।
त्यस्तै दुखान्तहरूको रङ्गमञ्चमा पाइला टेक्तामा उनी हामीलाई विकासशील राष्ट्रको सभ्यताको बारेमा वैचारिक अवतरण गराउन पुग्छन् । हाम्रो देशमा जब शिक्षाको ढोका उध्रियो त्यस बेला पश्चिमी मुलुकले विकासको लामो फड्को मारिसकेको थियो । सभ्यताको सही पथप्रदर्शनले विकासको लामो फड्को मार्नसकेका थिए पश्चिमाहरूले, जसको पृष्ठभूमि थियो तीनहजार वर्ष अघिको एथेन्सको सभ्यता । आफ्नो देशको सभ्यता अधभरो भएको बेला निबन्धकार ग्रीसको सभ्यतासँग आफ्नो देशको सभ्यता तुलना गर्न पुग्छन् । आफ्नो देशमा जनयुद्ध छेडिएको बेला, दानवीय प्रवृत्तिले साम्राज्य फैलाएको बेला पश्चिमी सभ्यता, सँस्कृति साहित्य र ज्ञानको अथाह भण्डार देखेर अचम्म मान्दै तुलनात्मक अभिव्यक्ति दिन पुग्छन् । देशमा चलेको द्वन्दले क्षतविक्षत उनको विवेकशील चिन्तन पश्चिमी मुलुकको सभ्यता र विकास देखेर छटपटाउँछ । उनी विवेक र भावलाई यही प्रस्तुत गर्छन् – ‘अब यो इ–लर्निङ हाम्रोमा प्रयोग गर्न सकिएला ? हामीले धेरैबेर सोच्यौ । हामीलाई शंकाले छोप्यो । त्यसबेला मेरो मनमा केही घटनाहरूको रिल फनफनी घुम्यो । हातमा लाठा बोकेर विनाशका गीत गाउँदै विद्यार्थीहरू मच्चिए । तीस वर्ष लगाएर गुरुहरूले जोडको एउटा ओएचपी धूलो पारिदिए, कम्प्युटर पडकाए ; कुर्सीहरू खरानी पारे, टेबुल ढुट्याए, पुस्तकालय बाले अझै बाँकी रहेकामा आगो झोस्न खोजिरहेका छन् । पाँच वर्ष भित्र कीर्तिपुरमा मात्रै कम्तीमा पचास लाखको सम्पत्ति स्वाहा भयो । कति गुरुहरूले राजीनामा ठोक्दै भाग्दै गरेका छन् र कति गोजीमा बोकेर काम्दै क्याम्पस पुगेका छन् । यस्ता डरलाग्दा कुरा आजानमा कसैलाई भन्न चाहिनँ तर सुकरातलाई सुनाउन पायो , अरस्तुलाई भन्नुपयो र प्लेटोसँग संवाद गर्नु पर्यो भनी म पनि ग्रीस सम्म पुगेको थिएँ । यहाँ निबन्धकारको उच्च आर्दश र विवेक प्रकट भएको पाइन्छ । ’
वास्तवमा केन्द्रमा बसेर मोफसलको साहित्यप्रति यति धेरै स्नेह प्रकट गर्नु निबन्धकारको भाषा साहित्यप्रतिको विशेष लगाव नै मान्नु पर्दछ । मोफसलको सहित्यलेखनको कम चर्चा हुने मोफसलका साहित्यकारहरूको सधैँ गुनासो रहने गरेको छ । यसलाई अपवादको रूपमा लिँदै सर्जक गोविन्दराज भट्टराईले मोफसलको साहित्यप्रति विशेष लगाव रहेको भनी यहाँ चर्चा गरेका छन् । उनले पूर्वको मेचीको दुई थुँगा फूललाई टिपेर यस पाइलामा सजाएका छन् । पूर्वका अन्य साहित्यकारहरूको नाम लिदै विशेषगरी श्यामकृष्ण श्रेष्ठ र गोपाल कुमार बस्नेतको क्रमश ‘मेरो जागिरे जीवन’ र ‘आफनै सेरोफेरो’ चर्चा गरेका छन् । दुबै साहित्यकारको लेखनमा उत्कृष्टता रहेको र झापाको ऐतिहासिक , प्रशासनिक, आर्थिक र सामाजिक अवस्थाको उजागर गर्ने यी कृति अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेको व्याख्या गरेका छन् । यो पाइला कलात्मकता भन्दा बढी विवरणात्मकरूपमा पाठकलाई स्विकार गर्न सजिलो पर्दछ ।
मोफसलको सिर्जना र केन्द्रसँगको मुठभेड सधैँ ओझलमा परिरहने मोफसल साहित्य लेखनको आफनै पीडा हुन्छ । यस शीर्षकमा मोफसल साहित्यप्रेमी समेत रहेका निबन्धकार पश्चिमाञ्चलको साहित्यिक गतिविधिको चर्चा गरेका छन् । धवलागिरि बाङ्मय मञ्चले स्थापना गरेका कार्यक्रममा धवलागिरिमा भएका साहित्यकारहरूको साहित्यिक उत्साहलाई दिल खोलेर प्रशंसा गरेका छन् । निबन्धकारले यहाँ साहित्यिक क्षेत्रमा पनि साहित्यकार स्वयम् ले विकेन्द्रीकरण सिद्धान्त लगाउनुपर्ने र एकलताबाट बहुलतातिर लाग्नु पर्ने दृष्टिकोण राखेका छन् ।
निबन्धकार विश्वविद्यालयमा अङ्ग्रेजी भाषाशिक्षक रहेका हुनाले उनीसँग अङ्ग्रेजी भाषासम्बन्धी धेरै घटना र अनुभव रहेको यहाँको निबन्धबाट बुझिन्छ । ती निबन्धलाई यस पाइलामा समावेश गरेकी छु । ती हुन् - त्रिवि दिवसमा भानुको सम्झना , कुनै ढोका खुलेन । कतै उज्यालो देखिएन , त्रिवि दिवसमा भानुको सम्झनामा यो पाइला कवि कालीप्रसाद रिजालले गरेका पश्चातापका अभिव्यक्तिबाट प्रभावित भएको छ । उनले भनेका छन् – ‘हाम्रो देश कहिल्यै पनि अङ्ग्रेजहरूको गुलाम भएन तर हामी अङ्ग्रेजीको भने सधैँ गुलाम रहँदै आएका छौँ । अङ्ग्रेजी स्कुलमा पढ्न पाएको भए अङ्ग्रेजीमा लेख्न सकेको भए म कत्राकत्रा पुरस्कार जितिसक्थेँ हुलाँ ।’ यो अभिव्यक्तिबाट थाहा हुन्छ अङ्ग्रेजी भाषाको लोकप्रियताको कुहिरोले हामीलाई कसरी ढाकिसकेको छ भन्ने र यहाँ निबन्धकार त्यो कुहिरोको घुम्टो यसरी उधार्न खोज्छन् – ‘उनले अङ्ग्रेजीमा लेखेर प्रसिद्धी कमाएका सम्राट उपाध्यायलाई हेरेर त्यो भनिरहेका थिए, मञ्जुश्री, डिबी गुरुङ आदिले कमाएका प्रशंसालाई हेरेर बोलिरहेका थिए अन्य भाषामा लेख्नु अतिरिक्त क्षमताको कुरो हो । त्यसको हामी प्रशंसा गर्दछौ तर त्यो भनेको अरूको गोठमा बाधिएका जर्सी गाई दुहिन्जेलको आनन्द हो । आखिर त्यो दुध पनि उतै जान्छ ।’ उनले यहाँ आफनो भाषाप्रति वितृष्णा जगाउने अभिव्यक्ति र कामप्रति नै तिखो व्यङ्ग्य छानेका छन् । अङ्ग्रेजी भाषाको मोहले विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरू मातृभाषाको आस्तित्व कसरी उखेल्न खोजिरहेका छन् त्यो पनि यहाँ देखाइएको छ । नेपालभित्र रहेका विभिन्न भाषालाई भाटाहरूको रूपमा नेपाली भाषालाई राष्ट्रको खाँबोको रूपमा उनले प्रतिकात्मक ब्याख्या गरेका छन् ।
कुनै ढोका खुलेन । कतै उज्यालो देखिएन – यो पाइलामा निबन्धकारले नेपाली समाजमा मात्र नभई विश्वमा नै अङ्ग्रेजी भाषा कसरी भूतजस्तो बनेर सबैलाई तर्साइरहेछ भन्ने कुरा देखाएका छन् । अङ्ग्रेजी भाषाको कारणले नै एउटा प्रेमीले प्रेमिका गुमाउनु परेको र अङ्ग्रेजी भाषाको कारण नै विद्यार्थीले आत्महत्या गर्नु परेको कुरा यहाँ खुलाएका छन् ।
प्रकाशित मिति : प्रकाशन मिति : शनिवार,5भाद्र, 2067